Kulan looga hadlayo caleemo saarka Qoor Qoor oo ka dhacay Dhuusomareeb - BANDHIGA
Kulan looga hadlayo caleemo saarka Qoor Qoor oo ka dhacay Dhuusomareeb
Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoor-qoor, ku xigeenkiisa Cali Daahir Ciid iyo Guddiga u xilsaaran munaasabadda lagu caleemo saarayo ayaa kulan ku yeeshay magaalada Dhuusomareeb ee xarunta maamulka Galmudug.
Kulanka ayeey diiradda ku saaraan suurtagalnimada munaasabadda Caleemo-saarka oo ku beegan 26-ka bishaan oo berri ah, waxyaabaha u hirgelay guddiga, madaxda ay martiqaadeen iyo cabsida la xiriirta caabuqa Coronavirus oo lagu baaqay in la joojiyo isu imaatinka Bulshada.
Guddiga ayaa warbixin guud siiyay Madaxweynaha iyo ku xigeenka Galmudug, waxa ay la wadaageen wadatashiyada ay ka sameeyeen dadka ka qaybgalaya iyo qaabka ay u qorsheeyeen munaasabadda caleemo-saarka.
Guddoomiyaha Guddiga Xafladda Caleemo-saarka Madaxweynaha iyo ku xigeenka Galmudug Yusuuf Garaad Cumar ayaa safar dhulka ah oo uu kaga tagay Dhuusamareeb ku tagay Koofurta Gaalkacyo oo ah Soohdinta ugu dambeyso ee Maamulkaas.
Yuusuf ayaa degmooyin iyo deegaanno kala duwan uu sii maray kula kulmay dad uu u arko in ay muhiim u yihiin ka qaybgalka Caleemo-Saarka, waxaana xubnahaas kamid ah Madaxweynihii hore ee Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo uu ugu tagay hoygiisa Gaalkacyo.
Axmed Cabdi Kaariye Qoor-qoor waxa uu ku guuleystay Doorasho ka dhacday Magaalada Dhuusamareeb 2-dii Febaraayo, waxaana maanta laga joogaa 52-maalmood, waxaana horyaalla wax ka qabashada waxyaabo badan oo horyaalla.
By : Press room Tags: Qoor Qoor oo isku diyaarinaya in la caleemo saaro iyo kulan looga hadlayo oo ka dhacay Dhuusomareeb